Umbiko kaZondo uphenya ibheshu laFraser | Scrolla Izindaba
Umbiko kaZondo uphenya ibheshu laFraser
Isiqephu sesihlanu nesokugcina sombiko wokulawulwa koMbuso sithole ukuthi lowo owayeyilungu lezobunhloli u-Arthur Fraser kanye nowayenguMengameli uJacob Zuma bayavikelana ngokuvimba ukungayi ejele.
Umbiko onikezwe uMengameli uCyril Ramaphosa enikezwa umphathi wamaJaji uRaymond Zondo ngoLwesithathu ebusuku uveza isithombe esibi sobugebengu ohlangothini lukaFraser.
Ufuna ukuthi oKlebe bavule kabusha uphenyo lwabo kuFraser ngokuqhuba umsebenzi wobunhloli ongekho ezincwadini zomthetho obizwa nge-Principal Agents Network (PAN).
“Izinsolo zibucayi futhi zikhomba ukuxhashazwa okukhulu kwemali ye-SSA njengokuthengwa kwezimoto ezingu-300 ezigcwele i-Gauteng kanye nezindlu eziningi ezibhaliswe ngamagama abantu abahlukene,” ngokusho kombiko.
U-R125 million namanje awaziwa ukuthi uvelaphi kanti uFraser kumele abekwe icala uma kuqoqwa ubufakazi obanele, kubika uZondo.
IJaji uZondo uphinde wathola ukuthi uFraser njengoba wayengumphathi we-State Security Agency wabangela ukuthi kukhishwe imali eningi engaziwa ukuthi wayenzani.”
“Emuva kokuqokwa kwakhe imali yesabelomali inyuke isuka emalini elinganiselwa ku-R42 million ngonyaka ka-2016 no-2017 yafinyelela ku-R303 million ngonyaka wezimali ka-2017 no-2018. Cishe u-74% ka-R225 million usetshenziselwe imisebenzi yomshoshaphansi ehhovisi lakhe.”
UZuma naye evikelwa nguFraser basebenzisana ngokubambisana ukuvikelana ngokungayi ejele.
UZondo uchithe inkulumo kaZuma yokuthi uphenyo nge-PAN luzobeka engcupheni ukuphepha kwezwe.
Isinqumo sikaFraser njengoKhomishana wamajele sokukhulula uZuma ngoshwele ngenxa yesimo sakhe sempilo ngaphansi kwezimo ezingabazekayo futhi ngokumelene nenqubo yebhodi elikhipha ushwele emajele”, sasiyingxenye yalobu budlelwano babo bobabili.
“Kuvela isithombe sokuthi uMnu uZuma umise uphenyo obelungaholela ekuboshweni kukaMnu uFraser ashushiswe mhlawumbe agqunywe ejele futhi noMnu uFraser wakumisa ukuqhubeka nokugqunywa ejele kukaMnu uZuma okwakungumyalelo weNkantolo yoMthethosisekelo.”
UZondo umile ngokumelene nezinsongo nokusatshiswa ngokufuna kuqhutshwe uphenyo lobugebengu olubhekiswe kuFraser.
Emasontweni adlule uFraser kanye nabanye abathintekayo ekuphucweni izinsiza zombuso eminyakeni eyishumi bazamile ukudicilela phansi uphenyo oluthathe iminyaka emine mayelana nokulawulwa kombuso.
Baphinde bazama ukucekela phansi isithunzi somphathi wamajaji ngokuphakamisa ukuthi usebenzisana noMengameli uCyril Ramaphosa obekuyitulo lokukhungathekisa abaphikisana noRamaphosa engqungqutheleni ezayo yokukhetha ubuholi be-ANC.
UFraser usanda kubamba uRamaphosa ecaleni lokugetshengwa kuka-$4 million epulazini likaMengameli e-Phala Phala e-Limpopo eminyakeni emibili edlule.